Akụkọ - Kedu ka ụlọ ọrụ nri si erite uru site na ime ụlọ ọcha?
Ahụike na ahụike nke ọtụtụ nde na-adabere na ndị nrụpụta 'na ndị ngwugwu nwere ike ijigide gburugburu ebe nchekwa na ọnọdụ na-adịghị ize ndụ n'oge mmepụta. Nke a bụ ya mere ndị ọkachamara na ngalaba a ji agbaso ụkpụrụ siri ike karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Site na nnukwu atụmanya ndị a sitere n'aka ndị na-eri ngwaahịa na ndị na-achịkwa usoro, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ụlọ ọrụ na-eri nri na-ahọrọ iji mkpocha ọcha.
Kedu ka ụlọ ọrụ nhicha si arụ ọrụ?
Site na nzacha na ikuku na ikuku, a na-ekpochasị ebe mkpochasị nke ọma na ụlọ ọrụ mmepụta; igbochi mmetọ. Tupu a intoabanye ikuku ahụ na mbara igwe ahụ, a na-asacha ya ka o were ebu, uzuzu, ebu na nje.
Achọrọ ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ebe a na-edebe ihe ọcha gbasoro nlezianya anya, gụnyere uwe dị ọcha na ihe nkpuchi. Ime ụlọ ndị a na-enyochakwa ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri nke ọma iji hụ na ihu igwe dị mma.
Abamuru nke ụlọ mposi dị n'ime ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri
Enwere ike ịchọta ụlọ nhicha n'ọtụtụ ngwa niile na ụlọ ọrụ nri. Kpọsị ha, a na-eji ha eme ihe na anụ na mmiri ara ehi, yana ịhazi nri nke kwesịrị ka gluten na lactose nwere onwe ha. Site na ịmepụta ebe kachasị dị ọcha maka mmepụta, ụlọ ọrụ nwere ike inye ndị ahịa ha udo nke uche. Ọbụghị naanị na ha nwere ike idebe ngwaahịa ha pụọ ​​na mmeru ahụ, mana ha nwere ike ịgbatị ndụ ndụ ma nwekwuo arụmọrụ.
Ihe atọ dị mkpa a ga-agbaso mgbe ị na-arụ ọrụ ụlọ ọcha.
1. Ime elu ga-emerụ microorganisms, jiri ihe ndị na-adịghị emepụta flakes ma ọ bụ ájá, na-eji ire ụtọ, mgbawa na mgbawa na-agbawa nakwa dị mfe dị ọcha.
2. A ghaghị ịzụ ndị ọrụ niile ọzụzụ zuru oke tupu enyere ha ohere ịsa ụlọ ọcha. Dị ka ihe kachasị akpata mmetọ, onye ọ bụla na-abanye ma ọ bụ na-ahapụ ohere ga-ejikwa ya nke ọma, na-achịkwa mmadụ ole na-abanye n'ime ụlọ n'otu oge.
3. A ghaghị itinye usoro dị irè iji kesaa ikuku, wepụ ihe ndị na-achọghị n'ime ụlọ. Ozugbo ikuku dị ọcha, enwere ike kesaa ya n'ime ụlọ.
Kedu ndị na-emepụta nri na-etinye ego na teknụzụ dị ọcha?
Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime anụ, mmiri ara ehi na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri nri pụrụ iche, ndị na-emepụta nri ndị ọzọ na-eji teknụzụ dị ọcha gụnyere: Igwe ọka, mkpụrụ osisi na ichekwa akwụkwọ nri, Sugar na confectionary, Bakeries, Seafood ngwaahịa nkwadebe wdg.
Mgbe oge nke ejighị n'aka na-agbasa site na mgbasa nke coronavirus, na ịrị elu nke ndị mmadụ na-achọ nri ndị a kapịrị ọnụ na nri ndị ọzọ, na-ama na ụlọ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ nri na-eji ụlọ mposi eme ihe. Airwoods na-enye ndị ahịa azịza ụlọ mkpuchi ụlọ ọrụ dị ọcha ma na-emejuputa yana ọrụ niile. Gụnyere ina analysis, atụmatụ imewe, kwuru, mmepụta iji, nnyefe, ewu nduzi, na-eji kwa ụbọchị mmezi na ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ a ọkachamara cleanroom Herọd system na-eweta ọrụ.
Post oge: Nov-15-2020